လုပ်ငန်းသုံးယဉ်, Vans / Trucks up to 7.5 t ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Changan Daihatsu Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Mazda Mitsubishi Nissan Subaru Suzuki Toyota
Vans / Trucks Up To ... (60)
Airbag: Driver (43)
Airbag: Passenger (34)
White Subaru Sambar 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အသံစ...
Suzuki Carry Mini Truck 2018
White Suzuki Carry Mini Truck 2018 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...
Silver Isuzu ELF Truck 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြ...
Isuzu ELF Crane Truck 2005
Pearl white Isuzu ELF Crane Truck 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pa...
Nissan Condor Truck 2004
Blue Nissan Condor Truck 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
Nissan Atlas Truck 2008
Pearl white Nissan Atlas Truck 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passe...
Pearl white Mitsubishi Canter Truck 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
White Daihatsu Hijet 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Casse...
White Honda Acty 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Casset...
Silver Subaru Sambar 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Casse...
Pearl White Subaru Sambar 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။...
White Isuzu ELF Truck 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် NHR69-7006815) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airba...
Blue Hyundai Porter II 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger.ြ...
Pearl White Mazda Bongo 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
Pearl White Mazda Bongo 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
White Mazda Bongo Truck 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် SKF2T-201864) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Cassette Radio. ဖော်ပြပ...
Suzuki Carry Mini Truck 2008
Pearl white Suzuki Carry Mini Truck 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
၇.၅ တန် အထက် ထရက်ကားများ
လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် များစွာ ရှိတဲ့ အထဲမှာ ၇.၅ တန် အထက် ကားများစွာလည်း မြန်မာပြည် အနှံ့မှာ တည်ရှိ နေပါတယ်။ သာမန် အသေးစား၊ အလတ်စား ကုန်စည် သယ်ယူ ပို့ဆောင် ရေးအတွက် တင် မဟုတ် တော့ပဲ အကြီးစား သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး အတွက် ၇.၅ တန် အထက် ကားများကို အသုံးပြုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် မှာဆိုရင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး အပြင် အခြားသော မြို့ကြီး မြို့ငယ် အသီးသီး တွေမှာ အသုံးပြု နေကြ တာကို မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းထဲမှာ ၇.၅ တန် အထက် လူသိများ နာမည်ကြီးတဲ့ ကားများကို ရွေးချယ် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
အစ်ဆူဇူး ထဲမှာ ဆိုရင် ELF ကား နာမည်ကြီး ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၄၈၀၀ စီစီ ရှိပြီး ဒီဇယ် လောင်စာ သုံး ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ အသုံးပြုပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် မော်ဒယ်တွေ အဝင် များတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ဆူဘီရှီ ထဲမှာ ဆိုရင် မစ်ဆူဘီရှီ ကန်တာ ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၃ မော်ဒယ် အဝင် များပြီး ကန်တာဟာ နာမည်ကြီး ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၁၈၅ သိန်း ဝန်းကျင် ပေါက်ဈေး ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၃၅၀၀ စီစီ ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ မာဇဒါ မှာ ဆိုရင် တိုင်တန် တို့လို ကား ရှိပါတယ်။ Mazda Titan ကနေ ဆိုရင် ၂၀၀၅ ခုနှစ် မော်ဒယ် အဝင် များပြီး အင်ဂျင် အရွယ် ၄၈၀၀ စီစီ ရှိတာ ကြောင့် အစ်ဆူဇူး ELF ရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနည်းနည်း သက်သာတာကို လိုချင် သူများအတွက် အစ်ဆူဇူး ထဲမှာ တင်ပဲ NPR Turbo တုိ့လို ကားမျိုး ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မော်ဒယ်တွေ အဝင်များပြီး အဟောင်းကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း ယူဒီ (UD) ကတော့ ကားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၆၄၀၀ စီစီ အရွယ် ရှိပြီး ဒီဇယ် လောင်စာကိုပဲ အသုံးပြု ပါတယ်။ ရိုးရိုး ဂီယာ အမျိုးအစား ၂၀၀၆ ခုနှစ်မော်ဒယ်တွေ အဝင်များ ပါတယ်။ အခြားသော ကားများ အနေနဲ့ ဟီးနိုး၊ ဖူဆို နဲ့ တရုတ်ပြည်ကနေ ဝင်တဲ့ ကုန်တင်ကားကြီး များစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဟီးနိုး ဆိုရင် တရားဝင် အရောင်းစင်တာတောင် လာဖွင့်နေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် အသစ်တွေကို ဝယ်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၇.၅ တန် အထက် ကားကြီးနှင့် မြန်မာပြည် ဈေးကွက်
မြန်မာပြည် အနေနဲ့ ၇.၅ တန် အထက် ကားများကို နေရာအနှံ့အပြားမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အဓိက အားဖြင့် ကုန်သွယ်မြို့များ ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မူဆယ် နဲ့ အခြားသော ဆိပ်ကမ်း မြို့များစွာမှာ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြု နေတာကို မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ထက် အဟောင်းတွေကို အသွင်းများ ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ် ကားကြီး များက အသစ်ဝယ်တာထက် စာရင် ဈေးပိုသက်သာ တဲ့ အခြေအနေ မှာ ရှိနေ သေးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ် ဝယ်ယူမယ် ဆိုရင် ကုန်ကျမှုက ပိုများ ပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် အနာဂတ် မှာ ဆိုရင်တော့ အသစ် ဈေးကွက်က ပိုတွင်ကျယ် လာနိုင် ချေ ရှိပါတယ်။ Motors.com.mm ကနေ ၇.၅ တန် အထက် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။